Inqubomgomo Yemfihlo – Chofoza lapha ukuze uqale ukunciphisa i-URL.
https://shortest.link Inqubomgomo Yemfihlo
Le nqubomgomo yobumfihlo ihlanganiswe ukusebenzela kangcono labo abanendaba nokuthi ‘Ulwazi lwabo Olungakhonjwa’ (PII) lusetshenziswa kanjani online. I-PII, njengoba kuchaziwe emthethweni wobumfihlo wase-US kanye nokuvikeleka kolwazi, ulwazi olungasetshenziswa lulodwa noma nolunye ulwazi ukukhomba, ukuxhumana, noma ukuthola umuntu oyedwa, noma ukukhomba umuntu ngokomongo. Sicela ufunde inqubomgomo yethu yobumfihlo ngokucophelela ukuze uthole ukuqonda okucacile kokuthi siqoqa kanjani, sisebenzisa kanjani, sivikela kanjani, noma siphatha kanjani imininingwane yakho engakhonjwa ngokuya ngewebhusayithi yethu.
Yiluphi ulwazi lomuntu siqu esiluqoqayo kubantu abavakashela ibhulogi yethu, iwebhusayithi, noma uhlelo lokusebenza?
Lapho u-oda noma ubhalisa kusayithi lethu, njengokufanele, ungacelwa ukuthi ufake i-Url yakho ende, i-Url emfushane, noma eminye imininingwane ukukusiza ngolwazi lwakho.
Siluqoqa nini ulwazi?
Siqoqa imininingwane kuwe lapho ugcwalisa ifomu noma ufaka imininingwane kusayithi lethu.
Silusebenzisa kanjani ulwazi lwakho?
Singasebenzisa imininingwane esiyiqoqa kuwe uma ubhalisa, uthenga, ubhalisela i-newsletter yethu, uphendula inhlolovo noma ukuxhumana kwezokumaketha, ukungena kwiwebhusayithi, noma ukusebenzisa ezinye izici ezithile zesayithi ngezindlela ezilandelayo:
• Ukwenza ngcono iwebhusayithi yethu ukuze sikusebenzele kangcono.
Siluvikela kanjani ulwazi lakho?
Sinikeza kuphela ama-athikili nolwazi. Asilokothi sicele izinombolo zekhadi lesikweletu.
Sisebenzisa ukuskena okuvamile kwe-Malware.
Imininingwane yakho iqukethwe ngemuva kwamanethiwekhi aphephile futhi ifinyeleleka kuphela kubantu abambalwa abanamalungelo akhethekile okufinyelela kulezi zinhlelo, futhi kudingeka ukuthi bagcine imininingwane iyimfihlo. Ngaphezu kwalokho, yonke imininingwane ebucayi / yesikweletu oyinikezayo ibethelwe nge-Secure Socket Layer (SSL) technology.
Sisebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokuphepha lapho umsebenzisi engena, ehambisa, noma ethola imininingwane yakhe ukugcina ukuphepha kwemininingwane yakho yangasese.
Konke okwenziwayo kucutshungulwa ngomhlinzeki wesango futhi akugcinwa noma kusetshenzwe kumaseva ethu.
Yebo. Amakhukhi ngamafayela amancane isayithi noma umhlinzeki wawo wesevisi awadlulisela kwi-hard drive yekhompyutha yakho ngokusebenzisa isiphequluli sakho seWebhu (uma uvumela) esenza ukuthi amasistimu wesayithi noma abahlinzeki bezinsizakalo bakwazi ukubona isiphequluli sakho futhi babambe futhi bakhumbule imininingwane ethile. Isibonelo, sisebenzisa amakhukhi ukusisiza ukukhumbula nokucubungula izinto ezinqoleni yakho yokuthenga. Futhi zisetshenziselwa ukusisiza siqonde okuncamelayo ngokuya ngomsebenzi wesayithi owedlule noma wamanje, osenza sikwazi ukukunikeza ngezinsizakalo ezithuthukisiwe. Siphinde sisebenzise amakhukhi ukusisiza ekuhlanganiseni idatha ehlanganisiwe mayelana nokuthintana kwesayithi nokuxhumana kwesayithi ukuze sikwazi ukunikela ngokuhlangenwe nakho okungcono kwamasayithi namathuluzi ngokuzayo.
Sisebenzisa amakhukhi ukwenza:
• Gcina umkhondo wezikhangiso.
• Hlanganisa imininingwane ehlanganisiwe emayelana nokuthintana kwesayithi nokusebenzisana kwesayithi ukuze unikeze okuhlangenwe nakho okungcono kwamasayithi namathuluzi ngokuzayo. Singahle futhi sisebenzise amasevisi wezinkampani zangaphandle athembekile alandelela lolu lwazi egameni lethu.
Ungakhetha ukuthi ikhompyutha yakho ikuxwayise njalo lapho kuthunyelwa ikhukhi, noma ungakhetha ukucisha wonke amakhukhi. Lokhu ukwenza ngezilungiselelo zesiphequluli sakho. Njengoba isiphequluli sihluke kancane, bheka Imenyu Yosizo Yesiphequluli sakho ukuze ufunde indlela efanele yokushintsha amakhukhi akho.
Uma ucisha amakhukhi, ezinye zezici ezenza ukuthi ulwazi lwakho lwesayithi lusebenze kangcono kungenzeka zingasebenzi kahle. Ngeke kuthinte umuzwa womsebenzisi owenza ukuthi ulwazi lwakho lwesayithi lusebenze kahle futhi kungenzeka lungasebenzi kahle.
Ukudalulwa komuntu wesithathu
Asithengisi, asihwebi, noma asidluliseli kumaqembu angaphandle imininingwane yakho engakhonjwa uqobo ngaphandle kokuthi sinikeze abasebenzisi isaziso sangaphambilini. Lokhu akubandakanyi ophathina bokubamba amawebhusayithi namanye amaqembu asisizayo ekusebenziseni iwebhusayithi yethu, ukuqhuba ibhizinisi lethu, noma ukusebenzela abasebenzisi bethu, inqobo nje uma lawo maqembu evuma ukugcina lolu lwazi luyimfihlo. Singakhipha imininingwane uma ukukhishwa kwayo kufanelekile ukuthobela umthetho, ukuphoqelela izinqubomgomo zethu zesayithi, noma ukuvikela amalungelo ethu noma abanye, impahla noma ukuphepha.
Kodwa-ke, imininingwane yezivakashi engakhonjwa inganikezwa kwamanye amaqembu ukumaketha, ukukhangisa, noma okunye ukusetshenziswa.
Izixhumanisi ezivela eceleni
Ngesinye isikhathi, ngokubona kwethu, singafaka noma sinikele ngemikhiqizo evela eceleni noma izinsizakalo kuwebhusayithi yethu. Lezi zingosi ezivela eceleni zinezinqubomgomo zobumfihlo ezihlukile nezizimele. Ngakho-ke, asinasibopho noma isikweletu ngokuqukethwe nemisebenzi yalezi zingosi ezixhunyiwe. Yize kunjalo, sifuna ukuvikela ubuqotho besiza sethu futhi samukele noma iyiphi impendulo mayelana nalezi zingosi.
Izidingo zokukhangisa ze-Google zingafingqwa ngemigomo yokukhangisa ye-Google. Zibekiwe ukuze zinikeze okuhlangenwe nakho okuhle kubasebenzisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=zu
Sisebenzisa i-Google AdSense Advertising kuwebhusayithi yethu.
I-Google, njengomthengisi ovela eceleni, isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso kusayithi lethu. Ukusetshenziswa kwe-Google kukhukhi ye-DART kuyenza ikwazi ukuthumela izikhangiso kubasebenzisi bethu ngokuya ekuvakasheni okwedlule kusayithi lethu nakwezinye izingosi ezikwi-Intanethi. Abasebenzisi bangakhetha ukuphuma kukhukhi ye-DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo ye-Google Ad and Content Network.
• Ukubikwa kwe-Google Display Network Impression
• Ukubikwa Kwabantu kanye Nezintshisekelo
• Ukuhlanganiswa Kwengxenyekazi ye-DoubleClick
Thina, kanye nabathengisi bezinkampani zangaphandle ezifana ne-Google sisebenzisa amakhukhi enkampani yokuqala (njengamakhukhi e-Google Analytics) namakhukhi enkampani yangaphandle (njengekhukhi le-DoubleClick) noma ezinye izihlonzi zezinkampani zangaphandle ndawonye ukwenza idatha ephathelene nokusebenzisana komsebenzisi ukuvela kwesikhangiso neminye imisebenzi yesevisi yesikhangiso njengoba ihlobene newebhusayithi yethu.
Abasebenzisi bangasetha okuncamelayo kokuthi i-Google ikukhangisela kanjani kuwe isebenzisa ikhasi lezilungiselelo zesikhangiso se-Google. Ngaphandle kwalokho, ungakhetha ukuphuma ngokuvakashela ikhasi le-Network Advertising Initiative Opt Out noma ngokusebenzisa i-Google Analytics Opt Out Browser add on.
I-Google reCAPTCHA V2.
Iyiphi idatha eqoqwa yi-reCAPTCHA?
Okokuqala i-algorithm ye-reCAPTCHA izobheka ukuthi ikhona yini ikhukhi le-Google kukhompyutha elisetshenziswayo.
Ngokulandelayo, ikhukhi elengeziwe le-reCAPTCHA lizongezwa kusiphequluli somsebenzisi futhi lizobanjwa – i-pixel ngephikseli – isithombe esiphelele sewindi lesiphequluli somsebenzisi ngaleso sikhathi.
Olunye ulwazi lwesiphequluli nolomsebenzisi okwamanje oluqoqiwe lubandakanya:
Wonke amakhukhi asethwe i-Google ezinyangeni eziyi-6 ezidlule,
Mangaki amagundane owenzile kuleso sikrini (noma uthinte uma ngabe usuthinta into ethintwayo),
Imininingwane ye-CSS yalelo khasi,
Ulimi lapho isiphequluli sisethwe khona,
Noma iyiphi i-plug-in efakwe kusiphequluli,
Umthetho Wokuvikela Ubumfihlo waseCalifornia Online
ICalOPPA umthetho wokuqala wombuso esizweni odinga amawebhusayithi ezentengiso nezinsizakalo eziku-inthanethi ukuthumela inqubomgomo yobumfihlo. Ukufinyelela komthetho kudlulela ngaphesheya kweCalifornia ukuthi kudinge noma yimuphi umuntu noma inkampani e-United States (futhi mhlawumbe kube ngumhlaba) osebenza amawebhusayithi aqoqa imininingwane yomuntu uqobo evela kubathengi baseCalifornia ukuthumela inqubomgomo yobumfihlo ebonakalayo kuwebhusayithi yayo esho ngqo imininingwane eqoqiwe nalabo abantu noma izinkampani okwabelwana ngazo. – Bona okuningi ku-http: //consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Ngokuya ngeCalOPPA, siyavumelana nalokhu okulandelayo:
Uma le nqubomgomo yobumfihlo isakhiwe, sizokwengeza isixhumanisi kuyo ekhasini lethu lasekhaya noma okungenani, ekhasini lokuqala elibalulekile ngemuva kokungena kuwebhusayithi yethu.
Isixhumanisi senqubomgomo yethu yemfihlo sifaka igama elithi ‘Ubumfihlo’ futhi sitholakala kalula ekhasini elishiwo ngenhla.
• Ekhasini Lethu Lobumfihlo
Ungashintsha imininingwane yakho yangasese:
• Ngokusithumela i-imeyili
Isayithi lethu liphatha kanjani ukuthi Ungalandeli Amasignali?
Sihlonipha ukungalandeleli amasiginali futhi ungalandeleli, tshala amakhukhi, noma usebenzise ukukhangisa uma indlela yesiphequluli se-Do Not Track (DNT) isikhona.
Ingabe isayithi lethu liyakuvumela ukulandela ngomkhondo umuntu ovela eceleni?
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi sivumela ukulandela umkhondo wokuziphatha komuntu wesithathu
I-COPPA (Umthetho Wokuvikelwa Kobumfihlo Bezingane Ku-inthanethi)
Uma kukhulunywa ngokuqoqwa kolwazi lomuntu siqu oluvela ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13 ubudala, i-Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) ibeka abazali ekuphatheni. IFederal Trade Commission, i-ejensi yokuvikela abathengi yase-United States, iphoqelela umthetho weCOPPA, ochaza ukuthi yini okufanele yenziwe ngabasebenza kumawebhusayithi nezinsizakalo ezenziwa online ukuvikela ubumfihlo nokuphepha kwezingane online.
Asithengisi ngqo ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13 ubudala.
Ingabe sivumela abantu besithathu, kufaka phakathi amanethiwekhi wesikhangiso noma ama-plug-ins, aqoqe i-PII ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13?
Imikhuba Yolwazi Olufanele
Izimiso Zokuziphatha Ezifanele Zokwakha zakha umgogodla womthetho wobumfihlo e-United States futhi imiqondo abayifakile ibambe iqhaza elikhulu ekwakhiweni kwemithetho yokuvikelwa kwedatha emhlabeni wonke. Ukuqonda Izimiso Zokusebenzisa Ulwazi Olufanele nokuthi kufanele zisetshenziswe kanjani kubalulekile ukuthobela imithetho ehlukahlukene yobumfihlo evikela imininingwane yomuntu.
Ukuze sihambisane ne-Fair Information Practices sizothatha izinyathelo ezilandelayo zokuphendula, uma kwenzeka kwephuka idatha:
Sizokwazisa abasebenzisi ngesaziso esisesizeni
• Kungakapheli izinsuku eziyi-7 zebhizinisi
Siyavumelana futhi noMthetho Odingida Ukulungiswa Komuntu ngamunye odinga ukuthi abantu babe nelungelo lokulandela ngokusemthethweni amalungelo okuphoqelelwa ngokumelene nabaqoqi bedatha nabaprosesa abahluleka ukulandela umthetho. Lo mgomo awudingi nje kuphela ukuthi abantu banamalungelo okuphoqelelwa kubasebenzisi bedatha, kepha futhi nokuthi abantu bangacela izinkantolo noma ama-ejensi kahulumeni ukuthi aphenye futhi / noma ashushise ukungalandelwa kwemithetho ngama-processors wedatha.
Umthetho we-CAN-SPAM ngumthetho obeka imithetho ye-imeyili yezentengiso, ubeka izidingo zemiyalezo yezentengiso, unikeza abamukeli ilungelo lokuthi ama-imeyili amiswe ukuthunyelwa kubo, futhi uchaze nezinhlawulo ezinzima zokwephula umthetho.
Ukuhambisana ne-CANSPAM, siyavuma okulandelayo:
• Ungasebenzisi izihloko ezingamanga noma ezidukisayo noma amakheli e-imeyili.
• Khomba umyalezo njengesikhangiso ngendlela enengqondo.
• Faka ikheli lendawo yebhizinisi lethu noma ikomkhulu lesiza.
• Qapha izinsizakalo zokumaketha nge-imeyili ezivela eceleni ukuze kuhanjiswane nazo, uma kusetshenziswa eyodwa.
• Hlonipha ukukhetha ukuphuma / ukuzikhipha ohlwini ngokushesha.
• Vumela abasebenzisi ukuthi bazikhiphe ohlwini ngokusebenzisa isixhumanisi esingezansi kwe-imeyili ngayinye.
Uma nganoma yisiphi isikhathi ungathanda ukuzikhipha ohlwini ekutholeni ama-imeyili azayo, ungasithumela i-imeyili ku
abuse@shortest.link futhi sizokususa ngokushesha kuzo ZONKE izincwadi.
Uma kunanoma yimiphi imibuzo mayelana nale nqubomgomo yobumfihlo, ungaxhumana nathi usebenzisa imininingwane engezansi.
Kugcine ukuhlelwa ngo-2021-01-11